Habeenkii Archives - SmartMe
Tag archive: galinka hore
Dom » Gelitaannada lagu calaamadeeyay "eve"
Eve Energy - Dib u eegida Smart Sockets oo ka socda HomeKit
Xaawa, tamarta habeenka
Ama waxaa laga yaabaa in dib u eegis Smart Outlet markale? Markan waxaan ku tusi doonaa Eve Energy! Guri kale oo HomeKit ah!
Xaaladda Fidinta - ka korodhso qalabka Bluetooth noocyadiisa kala duwan Xaawa
Bluetooth, Xaawa, habeen dheereyso
Mid ka mid ah aaladaha aan muddo dheer diyaarsanayay dib-u-eegista waa Eve Extend. Sida aan u jeclahay qalabka Xaawa, waxoogaa dhibaato ah ayaan ku qabay alaabtan. Sidee u shaqeyn doonaa sideese u shaqeysaa? Waqtiga qaar ...
Eve Cam - kamarad ka dhex muuqata HomeKit
Apple HomeKit, Xaawa, habeen kaam, Homekit, videokit aamin ah, kamaradda homekit
Waxaan guriga ku haystaa Eve Cam muddo dheer. Kani waa HomeKit kale ama xitaa kamarad HomeKit Secure Video ah oo gurigeyga timid. Sidee buu u shaqeeyaa toddobaadyadan hawlgalka ka dib? Hadday ...
Xaaladda Xawaaraha Xaaladda - Dib-u-eegista Sensor Motion ee HomeKit
qalabka dhaqdhaqaaqa, Xaawa, habeenka dareeraha dhaqdhaqaaqa
Sidee ku saabsan dib-u-eegista dareeraha dhaqdhaqaaqa ee ka shaqeeya WiFi oo si dabiici ah ugu xira HomeKit? Waan ku casuumayaa!
Ilaaliyaha Biyaha Eve - Dib u eegista dareeraha daadadka ee Eve
20 Janaayo 2021
tufaaxa, Apple HomeKit, dareeraha daadadka, Xaawa, waardiyaha biyaha, Homekit
Weligaa ma isweydiisay waxa la sameeyo marka makiinadda dharka lagu dhaqo ama weelka dhaqdo ay billaabaan inay daadadaan? Dib-u-eegidgan, waxaan kaaga warrami doonaa dareeraha daadadka biyaha ee 'Eve Water Guard' kaasoo ka ilaalin doona gurigaaga waxyeello soo gaadha. Ilaaliyaha Biyaha Eve waa dareen kale oo tan ...
Eve Thermo waxay kuxirantahay 3 - dib u eegista madaxa HomeKit
2 Janaayo 2021
Xaawa, habeen ka hor, madaxdii, Homekit
Xakamaynta kuleylka waa mid ka mid ah walxaha aasaasiga ah ee ku bilaabaya tacabur guri caqli badan. Madaxda Smart-ka ayaa horeyba uga soo muuqanaya guryo sii kordhaya waxaana mudan in dib loo eego noocyadooda soo socda. Maanta waxaan eegeynaa ...
Eve for Homekit oo leh tab cusub! Hubi Shabakadaada 'Thread Network'!
Xaawa, Homekit, HomePod Mini, thread, shabakad dunta
Eve for HomeKit waa barnaamij weyn oo loogu talagalay HomeKit oo aan kaliya diirada saareyn wax soo saaraha hal soo saare. Codsigu wuxuu helay cusboonaysiin cusub oo xiiso leh oo noo oggolaan doonta inaan hubinno aaladaha la jaan qaadi kara Shabakadda Thread ee aan hayno! Nooca ugu cusub ...